‘एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यविधि विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकको अपमान गरेको आरोप – Health Post Nepal
‘एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यविधि विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकको अपमान गरेको आरोप
२०७८ जेठ ३० गते १२:५६
सरकारले ‘एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ को कार्यविधि असार १ देखि लागू गर्ने भएको छ। कार्यविधि पहिलो चरणमा १० अस्पतालमा लागू गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ।
तर, कार्यविधि अपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न छाता संठगनहरूले विराधे जनाउँदै आएका छन्। यस्तो कार्यविधि मान्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ९७ लाख रकम विनियोजन गरी ‘एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ को कार्यविधि सञ्चालन गर्न भन्दै पत्र काटेको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनसँगै ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले विभिन्न विभागिय प्रमुखलाई कार्यविधिको फाराम भर्न सर्कुलर जारी गरे।
तर, ट्रमा सेन्टरका अधिंकास चिकित्सकले सो कार्यविधि अपूर्ण रहेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
९ वटा विभाग र ३ वटा युनिटसहित थप ३१ जना डाक्टरले कार्यविधि सच्याएर नआएसम्म लागू गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनीहरूले डा. पौडेललाई सो कार्यविधि लागू गर्न नसकिने भन्दै हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका छन्।
सरकारले ल्याएको एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा राम्रो भए पनि हो। तर, यसले चिकित्सकको विशेषज्ञतालाई अपमान गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
‘सबै स्वास्थ्यकर्मी कार्यविधिप्रति असन्तिुष्टि हुँदा–हुँदै डा. सन्तोष पौडेलले लागू गर्छु मात्र भनेर हुन्छरु उहाँले मात्रै काम गर्ने हो र? ’ एक चिकित्सकले प्रश्न गरे।
विभागीय र युनिट प्रमुखसहित अन्य चिकित्सकले बुझाएको पत्रमा ‘एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यान्वयनका लागि ल्याएको कार्यविधिले सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको अपमान र मानमर्दन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
‘हामी यस अस्पपतालमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई पनि उक्त कार्यविधि यथास्थितिमा स्वीकार्य छैन। विस्तारित स्वास्थ्य कार्यक्रम र हाल सञ्चालित अस्पतालका सम्पूर्ण नियमित सेवाहरुलाई हामी अझै बढी सहज र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तयार छौं तर यो कार्यविधि यथास्थितिमा हामीले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा जानकारी गराउँदै हाललाई उक्त कार्यविधि लागू नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यो कार्यक्रम लागू गर्न नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) ले पटक–पटक मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए।
तर, सरकारले एकतर्फी रूपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई मर्का हुने गरी कार्यविधि लागू गर्न लागेको भन्दै संघसंस्थाको विरोध जनाएका छन्।
‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ लागू भएका अस्पतालका चिकित्सकलाई एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ।
सो कार्यविधिले चिकित्सकको मानमर्दन र अपमान गरेको ट्रमा सेन्टरका विभागीय अर्थोपेडिक्स डा.रुद्र मरासिनी बताउँछन्।
‘सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एकै हिसाबमा राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस कार्यक्रममा त विशेषज्ञता हिसाबले प्रोत्साहन दिनुपर्छ।’
‘अस्पतालको स्कोरिङ स्टिम सेवाको मूल्याकंन गर्छ। तर, चिकित्सकले सेवा र विशेषज्ञतालाई यहीँ राखेर हेर्न मिल्दैन,’ डा. मरासिनी भन्छन्।
त्यसैगरी, यो कार्यविधिले स्वास्थ्यकर्मीलाई बाध्यकारी बनाएको उनको तर्क छ।
उक्त कार्यविधिमा नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै विगतका सुझाव र सहमतिविपरीत आएको भन्दै संशोधनको माग राखेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था